पाण्डा गर्भवती भएको खबरले शेयर बजारमा एकाएक उछाल ! |
Home शेयर बजार पाण्डा गर्भवती भएको खबरले शेयर बजारमा एकाएक उछाल !
पाण्डा गर्भवती भएको खबरले शेयर बजारमा एकाएक उछाल !
स्मरण रहोस् उक्त पाण्डाले सन् २०१२ मा बच्चा जन्माएको थियो, तर केही दिनमै उक्त बच्चा परेको थियो । त्यतिबेला पाण्डाले बच्चा जन्माउनु केही दिन अघिमात्रै ऊ गर्भवती रहेको थाहा भएको थियो ।- अनलाइनखबर